Etu ị ga - esi ahọrọ teliskop: atụmatụ, mmefu ego na ahụmịhe | Netwọk Mgbasa Ozi
Maka mmadụ niile na-enwe mmasị ịhụ mbara igwe n'abalị, ọ dị mma ịnwe igwe onyonyo dị mma. Ngwa nyocha a nwere njirimara dị iche iche a ga-agbanwe na nke ọ bụla. E nwere ọtụtụ puku ndị mgbanwe iji banye na akaụntụ na ọtụtụ ụdị na ahịa dị iche iche ahịa. Ya mere, lee, anyị ga-akụziri gị esi họrọ teliskop ịga na njirimara niile ị ga-eburu n'uche na ebumnuche bụ isi ị ga-eji ya.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị otu esi ahọrọ telescope n'ihe metụtara ogo na ọnụahịa ịchọrọ.
1 Etu ị ga - esi ahọrọ teliskop dịka ị si emefu ego gị
1.1 Telescopes nke euro 200 ma ọ bụ obere
1.2 Telescopes ruru 500 euro
1.3 Telescopes ruru 800 euro
1.4 Telescopes si 1000 euro
2 Otu esi ahọrọ teliskop dị ka oge nyocha
3 Otu esi ahọrọ teliskop dabere na nyocha gị
Etu ị ga - esi ahọrọ teliskop dịka ị si emefu ego gị
Ihe mbụ ị ga-atụle bụ mmefu ego. Ọ bụ ihe kacha mkpa. Ọ bụ ihe na-abaghị uru ma ọ bụrụ na inwere ihe ọmụma banyere nleba anya na mbara igwe, mbara igwe, wdg. Ọ bụrụ na ịnweghị ego ịzụta telescope dị elu. Anyị ga-agba mbọ ịkesa onyokomita dị iche iche nwere ike inyere anyị aka dị ka mmefu ego dị iche iche si dị.
Telescopes nke euro 200 ma ọ bụ obere
Ọ dị obere na anyị nwere ike ịchọta telescope dị mma n'okpuru ọnụahịa a. Ikwesiri iche na oburu na anyi azuta igwe onyogho di otu a ma choputa na i nwere obi uto banyere ihe banyere mbara igwe, i gha acho izuta ihe di nma karie 200 ndi a agaghi enwe uru. Kama, ọ bụrụ na ịchekwa ma zụta ihe ka mma, ị nwere ike iji ya mee ogologo oge ma nweta karịa ego gị.
Buru n'uche na ọnụahịa a ezughị iji nweta telescope zuru oke zuru oke nke nwere tripod na ugwu. Ha na-enwekarị optics ọjọọ ma ọ bụ ugwu na-ejighị n'aka. Ndị a bụ akụkụ ndị bụ isi iji mee ka ị mata nlele nke igwe. Anyị na-akwado ezigbo nyocha anya mana ọ na - ewe oge karịa iji malite bụ iji anya nke uche ụfọdụ kpakpando dị mkpa.
Telescopes ruru 500 euro
Na-emebi mmefu ego dịtụ ntakịrị. Ọ bụ otu mmefu ego O nwere ike ime ka anyị nwee ezigbo ọysụ na nnukwu ndakpọ olileanya. N'ime ọnụọgụ ndị a, anyị enweghị ike ịchọta ụfọdụ ezigbo ihe na ụfọdụ ihe ọjọọ. Nke a bụ ihe kpatara ị ga - eji mata otu ị ga - esi họrọ nke ọma. N'ime ọnụahịa a, anyị nwere ike ịchọta telescopes zuru oke iji bido na mbara igwe nke kwụsiri ike yana nnukwu oghere. Ha na-adịkarị mfe ijizi, ọ bụ ezie na ha enweghị moto. Ha abughi ihe di nkpa maka astrophotography ma odi obere ibu.
Anyị nwekwara ike ịchọta ụfọdụ ezigbo mma ma ọ bụrụhaala na anyị na-akụ nzọ na azimuth mounts na telescopes dị mma.
Telescopes ruru 800 euro
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị adaba Amawaputala maka ndị ọhụrụ na-enyocha mbara igwe. Anyị na-agagharị n'ọtụtụ ọnụahịa anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ akụrụngwa mara ezigbo mma. N'iburu ụdị dịgasị iche iche na-eto eto, mkpebi ahụ ga-adaberekwu na mmasị anyị, ọdịmma na mmasị anyị. Ọ bụ ọnụahịa ọnụahịa nke nwere ihe egwu dị na ya nke anyị nwere ike ịchọta ezigbo akụrụngwa mana ndị ọzọ anaghị adaba na ihe anyị na-achọ.
Telescopes si 1000 euro
Nke a bụ ebe eluigwe na ụwa nke ohere ga-emepe. Anyị nwere ike ịchọta ọkwa dị elu nke na-enye anyị ohere ịnwe ọtụtụ telescopes anyị nwere ike iji n'otu ugwu. Ọbụna inwe ike ịmalite ụwa nke astrophotography site na nkasi obi ka ukwuu.. Anyị nwekwara ike ịchọta ụfọdụ onyokomita nke enwere ike iji ekwentị na-arụ ọrụ ma na-ahapụ anyị ka anyị meghee ọnụ anyị.
Otu esi ahọrọ teliskop dị ka oge nyocha
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa iji mụta otu esi ahọrọ teliskop bụ oge ị ga-enwe ike ịrara iji lelee igwe. Ọ bụrụ n ’ị ga - eme mkpirisi na mkpirisi oge, ọ baghị uru itinye oge dị ukwuu. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ bụrụ n ’ị ga - anọ ọtụtụ abalị ịchọpụta ma ọ bụrụ na ọ ga - aka mma ka ị nwee teleskop. Inwe njikere iji ọtụtụ awa leruo ihe abụghị otu ihe ahụ mmadụ mere, ya abụrụ na ọ ga-eme ngwa ngwa hụ ụlọ kpakpando nke ọma.
Ka anyị were ya na anyị na-arara awa abụọ maka ihe omume ntụrụndụ a. Ọ baghị uru n’inwe teliskop nwere ọtụtụ akụkụ nke nwere ugwu ugwu ma ọ bụ nke na-ewe ogologo oge iji mee ka ọ dị mma. Telescopes ndị a dị nnọọ mgbagwoju anya ma ọ dị mkpa ka etinye ha ebe ahụ ebe ọ nwere ọtụtụ akụkụ. Yabụ, anyị ga-ewe ogologo oge wee wepu ha ma wezuga ha ebe ọ bụ na n’ikpeazụ anyị agaghị enwe ọ theụ.
Ọ bụrụ na anyị ga-edebe obere oge, anyị kwesịrị ịmalite oge ahụ karịa. Ọ kachasị mma ịnwe teknụzụ ejiri aka nwere ugwu altazimuth. N'echiche a, ika Dobson bu ndi kacha merie na egwuregwu a.
Otu esi ahọrọ teliskop dabere na nyocha gị
Buru n'uche ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọdịnala ọdịnala ma ọ bụ teknụzụ dijitalụ. Onwere ndi huru ibi ndu kpakpando n’usoro omenala dika odi ka ndi ochie n’akpukwo ihe mgbe ochie. N’okwu a, iji teknụzụ aka na ụfọdụ eserese dị n’eluigwe, anyị nwere ike iji ọtụtụ afọ lelee mbara igwe. Enwere ndị na-ahọrọ ịdabere na teknụzụ ma na-ahọrọ echiche nke iji teliskop na-arụ ọrụ site na ekwentị mkpanaaka ma na-ele ihe oyiyi na kọmputa.
Anyị nwere ike ịchọta ihe na mbara igwe aka ma ọ bụ mee ka telescope rụọ ọrụ niile maka anyị. Nsogbu a na teknụzụ bụ na ọ nwere ike bụrụ aghụghọ. Ojiji ya nwere ike ime ka anyị nwekwuo ntụsara ahụ ma mee ka anyị ghara ịmụ igwe ma ọ bụ amaghị ka esi eji telescope n'onwe anyị aka. N'aka nke ọzọ, onyokomita e ji aka rụọ nwere ike ime ka ihe sikwuoro ike na mbụ, mana ọ ga-amata na ịchọta n'onwe gị ụyọkọ kpakpando nke afọ ga-eweta ọ happinessụ obi ụtọ dị ukwuu na nghọta onwe onye.
A na-anakwere njikọta abụọ mana ọ siri ike ijikọ n'otu otu. Anyị ga-ahọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ bụrụ na mmefu ego anyị nwere adịghị elu, anyị agaghị enwe ike ịhọrọ naanị telescope akwụkwọ ntuziaka. Ọ bụrụ na mmefu ego anyị buru ibu, anyị nwere ike ịhọrọ ị nweta nkasi obi ọzọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu esi ahọrọ telescope.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Otu esi ahọrọ teliskop